‘फ्रान्समा लकडाउन उल्लङ्घन गरे १ सय ३५ यूरो जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था छ ‘ – प्रशान्त उप्रेती व्यबसायी – Hotpati Media
८ बैशाख २०७७, सोमबार १३:४६ मा प्रकाशित (5 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
सन २००८ मा विद्यार्थी भिसामा फ्रान्स पुगेका प्रशान्त उप्रेती यतिबेला आफनो व्यवसायलाई मार्च ९ देखि बन्द गरेर लकडाउनमा परिवारसँग समय बिताइरहेका छन् | चीनको हुवान प्रान्तबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिदो छ । मानवजातिलाई नै ठुलो चुनौति दिइरहेको कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई धरासयी बनाउँदैछ ।
फ्रान्सबाटै नेपाल आएकी प्रसिद्धि श्रेष्ठ कोरोनाबाट निको भएर घर फिरेकी छिन् तर फ्रान्समा रहेका नेपालीको अवस्था चाहि कस्तो छ ?एनआरएन फ्रान्सका सल्लाहकार, रक्तदान अभियन्ता , व्यवसायी उप्रेतीसँग नेपालीहरुको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँका संघसस्थाले कसरी नेपाली समुदायलाई सहयोग गरीरहेका छन् यसैको सेरोफेरोमा हटपाटीको लागि ऐश्वर्य श्रेष्ठले गरेको कोरोना संवाद प्रस्तुत गरेका छौं |
फ्रान्समा कहिलेदेखि रहदै आउनुभएको छ ?
म नेपालबाट फ्रान्समा २००८ सालमा विद्यार्थी भिसामा आएको हुँ । अहिले परिवारको साथमा व्यवसाय सञ्चालन गरीरहेको छु ।
चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर फैलिरहेको छ फ्रान्सको अवस्था कस्तो छ ?यहाँलाई जानकारी छ ?
फ्रान्समा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएको छ, संक्रमितको संख्या २ लाख पुग्न लागिसक्यो भने १९३२३ जना बढीले ज्यान गुमाइसके । चीनमा कोरोनाले हजारौ मानिस संक्रमित हुँदा फ्रान्स सरकारले खासै चासो दिएन, जब पहिलो व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा प¥यो सरकारले मार्च ९ मा लकडाउन घोषण ग¥यो । सर्वसाधरणले एक घण्टा एक्लै बाहिर निक्लन पाउँछ । लकडाउन एकदम कडा छ । उल्लघन गरेमा १ सय ३५ यूरो जरिबाना अनि जेल सजायको व्यवस्था छ ।
फ्रान्समा कति नेपाली कार्यरत रहेका छन् विषेशगरी कुन क्षेत्रमा आवद्ध छन् उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
फ्रान्स छ हजार नेपाली छन जो विद्यार्थी, श्रमिक, सैनिक सेवामा छन् । अहिलेसम्म कोही पनि नेपाली संक्रमित भएको भनेर आधिकारिक रुपमा बाहिर आएको छैन्, यद्दपि केही व्यक्तिमा संक्रमित भएको हाल निको भैसकेको भन्ने कुरा थाहा पाएको छु । तर उहाँहरु सम्पर्कमा नआउनु भएकोले आधिकारिक रुपमा नेपाली संक्रमित भएको मलाई जानकारी छैंन, म राजदूतावासको सम्पर्कमै छु ।
तपाईको सम्पर्कमा बस्न, खाना समस्यामा परेका विद्यार्थीहरु कोही सम्पर्कमा आएका छन् ?
सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्नु पूर्व हामीले अध्ययनका लागि फ्रान्समा आएका नयाँ ६० जना विद्यार्थीलाई खाद्यान्न सामाग्री एनआरएनएको नेतृत्वमा वितरण ग¥यौ ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति फ्रान्स ,एकता समाज फ्रान्स ,प्रबासी नेपाली एकता मंचले राहत केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको छन । दोस्रो चरणमा समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने हेतुले यहाँ रहेका विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा सहयोग संकलन भैरहेको छ । त्यो केही दिनमा वितरण गर्नेछौ । अरु राष्ट्रमा रहेका नेपालीलाई जस्तो समस्या यहाँ नभएको जानकारी गराउछु ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न फ्रान्स सरकारले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
यहाँ एकदम कडा छ दिनमा एक घण्टा मात्र बाहिर निक्लन पाउँछन् सर्वसाधारणले, तपाईलाई लाग्न सम्पन्न राष्ट्रमा समस्या हुन्न, स्वास्थ्य अवस्था भयभहको बेला नेपालको भन्दा पनि नाजुक छ । बजारमा मास्क छैन, स्यानिटाइजर छैन्, महंगी बढेको छ ,यहाँ पनि भेन्टिलेटर नभएको अवस्था छ ।
सरकारले घरभित्रै बस्न भनेकोले सबैले नियमको पालना गरेका छन् । कुनै समस्या या बिरामी परेमा घरैमा एम्बुलेन्स आउँछ । फ्रि उपचार हुन्छ । समयमा सरकारले पुर्व तयारी नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । स्वास्थ सामग्री र उपकरणमा फ्रान्स पूर्ण रुपमा चीनमा आश्रित भएको देखिन्छ ।
अन्य देशमा जसरी यहाँ नेपाली हताहत भैहालेको छैनन् । सुरक्षित छन् । कोही पनि हामी नेपाल जान चाहन्छौ भनेर हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन् । यहाँ दुतावासले पनि कोरोनाबाट बच्न सूचना तथा जानकारी दिइराखेको छ । त्यस्तो समस्यामा कोही परेका छन् भने आवश्यक सहयोग गर्न संघ संस्था अनि राजदूताबास तयार छ ।
तपाई आफु चाहि कसरी दनचर्या विताइरहनुभएको छ ?
परिवारसँग बसेर बिताइरहेको छु । मलाई साहित्यमा रुचि भएकोले सिर्जनामा केही समय दिइरहेको छु । म तपाईहरुलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारले जारी गरेको लकडाउनको राम्रोसँग पालना गरौं । जे मा रुचि छ त्यो काम घर भित्रै बसेर गर्न सकिन्छ । घरमा बसेर नमोटाऔं । योगा, ध्यान गरौ । सिर्जनशिल बनौं भन्न चाहन्छु ।आफु भित्रको लुकेको प्रतिभा उत्खनन गरौं।
कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन सामाजिक दुरी कायम गरौं, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऔं । सब भन्दा ठुलो कुरा लकडाउनको पालना गरौं भन्न चाहन्छु । जनता अनुशाशित हुने घडी आएको छ ।लकडाउन पालना गर्नुपर्छ | उल्लङ्घन गरे हामीलाई पशुपतिले बचाइराख्दैनन् ।
अन्तमा हटपाटीका पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरस विश्व जगतलाई चुनौती दिइरहेको छ, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका शक्ति राष्ट्रले हेलचेक्रयाइ गर्दा भयवहको स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारले बेलैमा लकडाउन घोषणा गरेर राम्रो काम ग¥यो, सरकार पारदर्शी र दुरदर्शी हुनुपर्छ । जनताको आँशुमा भ्रस्टाचार गरिन्छ भने पद ,ओहोदा नहेरी दण्डित गरौं । स्वास्थ क्षेत्रलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरौं । जसले गर्दा विपत्तिको घडीमा अन्योलको अवस्था सिर्जना नहोश । बिरामीले अस्पतालको ढोकाबाट रोग बोकी फिर्ता हुने अवस्थाको अन्त्य होश । स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । चालोस भन्ने कामना गर्दछु । सरकारको मात्र मुख नताकौं आफनो ठाँउबाट सबैले कोरोना संक्रमण रोक्न पहल गरौं भन्न चाहन्छु ।